पीपीई आएन, रेनकोटको भरमा कोशीका स्वास्थ्यकर्मी
कोशी अनलाइन बुधबार, १२ चैत, २०७६ मा प्रकाशित
विराटनगर, १२ चैत । बुधबार दिउँसाे ३ : ३० बजे कोशी अस्पतालको इमरजेन्सी वार्डमा ६ स्वास्थ्यकर्मी थिए ।
सधै व्यस्त हुने कोशीको इमरजेन्सी सुनशान थियो । तर ६ जना स्वास्थ्यकर्मी ‘हाइअलर्टमा’ ।
अस्पतालमा विरामी नभएपनि सतर्कताका लागि आवश्यक सामाग्री प्रयोग गरेका उनीहरु फुर्सदमा भने थिएनन् । मास्क लगाएपनि उनीहरुको चिन्ता र तनाब आखाँमा प्रष्टै देखिन्थ्यो ।
इमरजेन्सीको च्यानल गेट बन्द थियो ।
बन्द इमरजेन्सी अगाडी एउटा एम्बुलेन्स आयो । सामान्य सतर्कता अपनाएका व्यक्तीले इमरजेन्सी छिर्ने बैकल्पीक ढोका पनि बन्द गरे ।
च्यान गेटबाट एम्बुलेन्स चालकलाई सोधे ‘ कस्तो विरामी ?’
ड्राइभरले कोरोना आशंका गरेको बताए । स्वास्थ्यकर्मी कक्षमा बसेका अन्य दुईजना गेट अगाडी पुगे । च्यानल गेट बाहिरबाट एक पुरुषले रतुवामाईबाट आएको भन्दै कागज दिए ।
एम्बुलेन्समा युवक थिए । चेन्नाईबाट आएका ती युवकलाई बान्तासँगै जोरो पनि आएपछि स्थानीय सरकारले कोरोनाको आशंकामा अस्पताल पठाएको रहेछ ।
ट्राभल हिस्ट्र बारे सोधपुछ गर्दै गर्दा अर्काे एम्बुलेन्स पनि आइपुग्यो । गेटमै भएका स्वास्थ्यकर्मीले सोधे कस्तो विरामी ? गाडीबाट उत्रिएका आफन्तले बिष सेवन गरेकाे विरामी भन्ने जवाफ दिए । यो बेलामा पनि विष खाएको विरामी ! नोबेल अस्पताल लैजानुहोस् । विरामीका आफन्तको भनाई नसकिदै गेटमै रहेका स्वास्थ्यकर्मीले भने ।
अघिल्लो एम्बुलेन्समा आएका विरामीलाई आइशोलेसन अगाडी जान भन्दै स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक काजगी प्रकृया मिलाउन थाले । र्‍याङकोट लगाएर बसेका उनीहरु मध्ये एकजनाले इमरजेन्सी वार्डको गेट वरपर औषधि छर्किए ।
लगतै एक अधबैशे महिला र पुरुष आए । कोरोना बारे अनविज्ञजस्ता देखिने महिलाले भनिन् ‘ पेट धेरै दुख्छ ।’ इमरजेन्सीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीले औषधि खानुहोस भन्दै कागजमा प्रेस्किप्सन लेखेर दिए ।
‘के गर्ने जोखिम छ, पीपीई (प्रशनल प्रोटेक्ट इक्युपमेन्ट) पनि राम्रो छैन् ।’ डिउटीमा खटिएकी नर्सले भनिन ‘ एउटै गम्बुट पालो गरी–गरी लगाउनुपर्छ ।’
अस्पतालले इमरजेन्सीमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीका लागि पीपीईका नाममा र्‍याङकोट, गम्बुट, मास्क, टाउकोमा लगाउने टोपी अनुहार छोप्नका लागि प्लाष्टीक दिएको छ ।
पर्याप्त सुरक्षा सामाग्री नभएका कारण काम गर्दा जोखिम बढेको उनीहरु बताउँछन् । संकास्पद विरामी नजिक जानै जोखिम हुने उनीहरुको गुनासो छ ।
कोरोना पोजेटिभ नभेटिएको अवस्थामा अहिलेका सामाग्री पर्याप्त भएपनि कोरोना संक्रमित विरामी भेटिए अहिलेकै पीपीइ प्रयाेग गरेर विरामीसँग जान नसकिने उनीहरूले बताए ।
बुधबार मात्र नर्सहरूले पीपीइ नपाएकाले काम गर्न नसक्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाए । प्रदेश सरकारले तत्काल प्रवन्ध गर्ने भनेपछि उनीहरू काममा फर्किए ।
मेसु भन्छिन्– पर्याप्त पीपीई बिना काम गरिरहेका छाैं
कोशी अस्पताल विराटनगरकी मेडिकल सुपरीटेण्डेन्ट डाक्टर संगीता मिश्रा अस्पतालसँग पर्याप्त पीपीई नै नभएको बताउँछिन् ।
प्रदेश सरकारले केही पीपीई दिएपनि पर्याप्त नभएको उनको भनाई छ । ‘अहिले र्‍याङकोट लगाएर काम गरिरहेका छौं ।’ उनी भन्छिन्‘ संकास्पद व्यक्तीको थ्रोट स्वाब निकाल्नुपर्दा सरकारले दिएको सामाग्री प्रयोग हुन्छ ।’
उनी थोरै सुरक्षाका सामाग्री कै भरका कोशी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले काम गरिरहेको बताउँछिन् । उनका अनुसार संघ र प्रदेश सरकारबाट पर्याप्त पीपीइ न आएपछि अस्पताल आफैले पीपीइ बनाउने तयारी थालेकाे छ ।
कोशी अस्पतालले १० बेडको आइसोलेशन वार्ड छ । त्यस्तै नेशनल ट्रडिङको भवनमा कोशी अस्पतालले नै हेर्नेगरी ५० सैय्याको अस्थायी अस्पताल निर्माण भइरहेको छ ।
दोहोरो जिम्मेवारीमा स्वास्थ्यकर्मी रहेपनि अत्यावश्यक सामाग्री नहुँदा कठिनाई भएको उनको गुनासो छ ।
मंगलबारे अस्पतालको नाम नफेर्न आग्रह
प्रहरीलाई १७० मोटरसाइकल हस्तान्त्रण
दवाबमा बार्सिलोना, उपाधि दाबेदारीका लागि आजको खेल जित्नै पर्ने
प्रिमियर लिगमा आज चार खेल हुँदै, लिग विजेता लिभरपुल पनि भिड्दै
दिउँसाे सुत्ने बानी छ ? यस्ता छन् फाइदा र वेफाइदा
नेकपा १४ जिल्लाका अध्यक्ष र सचिवले भने ‘एकताको बिकल्प छैन्’